“Tokony ho ny Rariny sy Sazy No Sasany Amin’ireo Teny Tokony Hifandrohy Amin’ny Famonoana Vehivavy” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2018 11:01 GMT
Miorina any Cochabamba, any Bolivia i Angela Fuentes, mpikambana avy amin'ny vondrona Mujeres de Fuego. Ity manaraka ity dia fanehoankevitra nataon'i Angela mikasika ilay zavonteny momba ilay teny hoe ”feminicidio” (famonoana vehivavy).
Teny manjaka be avy tamina lahatsoratra 1.540 navoaka teo anelanelan'ny volana Mey 2017 sy Mey 2018 ahitana ny hoe ”feminicido” tao anatin'ny vondrona Media Cloud 2 an'ny media amin'ny teny espaniola ao Bolivia. (sary lehibe kokoa)
[ Ao anatin'ny zavonteny], ireo teny tokony ampiasaina mba hanazava ny famonoana vehivavy ary tafiditra ao amin'ny lalàna Boliviana dia ny hoe ao amin'ny famonoana vehivavy dia nisy rariny tsy nisy fe-potoanany, nisy sazy nomena, nanome lanjany ny marina ara-materialy sy ny fanadihadiana nanamarina ny famonoana vehivavy. [Tiako ny hahita izany] nomena ny fifantohan-tsaina laharam-pahamehana, nohajaina araky ny ao anatin'ny lalàna ireo zo, ary nanomezana antoka ny fiarovana sy fanarenana eo amin'ny fianakaviana. Nanatevin-daharana amin'ny fialàna amin'ny kolikoly ary nampiseho ny fahaizana manokana ananan'ireo mpitsara mitsara amin'ny fomba fijerin'ny lahy na vavy ny fiarahamonina sivily. Ireo no teny marina izay tokony any anatin'ny media fa tsy ny mifamadika amin'izany – tokony ho any amin'ny tampony ireo teny any ambany indrindra. Tokony ho ny “rariny” sy “sazy” no sasany amin'ireo teny tokony hifandrohy amin'ny famonoana vehivavy.
Ampahany amin'ny andiana Rising Frames novlavolaina tao anatin'ny sehatrana hetsika nokarakarain'i Raisa Valda Ampuero avy ao Warmi.Red sy Fabiola Chambi ity. Nanampy tamin'ny fikarakarana atrikasa natao tamin'ny 30 Mey 2018 izy ireo tany Cochabamba, any Bolivia, izay namondrona ireo mpisolo tena avy amin'ny fikambanana sy vondrona maro samihafa mba handinika ny fomba hahatazànana azy ireo, na ny olana mampiasa loha azy, eny anaty fampahalalambaovao ao Bolivia ary namorona tantara ho setrin'izay fahatazànana izay.
Afrika Mainty 18 ora izay
Karaiba 1 andro izay